China Electric hammer, chisel elektrika, SDS, Max, Hex, chisel manondro, chisel fisaka, piesy efatra sy chisel hexagonal dimy pit, chisel pneumatika sy mpanamboatra | Boda
Hamazo elektrika, paosin-kery elektrika, SDS, Max, Hex, pao maranitra, paingotra fisaka, lavaka efatra ary paiso hexagonaly dimy, paiso pneumatika
Ampiasaina betsaka amin'ny tranobe fananganana, ny chisel BOSENSA dia aondrana eran'izao tontolo izao, vita amin'ny asa vita tsara izy ireo. Manana fifehezana henjana amin'ny THE raw material izahay. Ny teknisiana dia manatsara hatrany ny vokatra.
Ny orinasa Bosenda dia miorina ao amin'ny tanànan'ny fanamboarana fitaovana any Shina, izay misy ny famokarana sakamalao, bitika fandavaka ary tsofa loaka sns izay manana tombony feno manerana ny firenena. Ny fanaovan-tsika sy ny fikatsahantsika ny hatsaran-vokatra dia mahatonga ny teknolojia fanamboarana ho an'ny zanakay ho matotra ary hitazona fifaninanana amin'ny tsenan'ny fitaovana.
Ny andiam-pahefana Bosenda dia eken'ny besinimaro amin'ny tsena iraisam-pirenena, mitohy hatrany ny asa aman-draharaha. Ny mpanjifanay dia avy amin'ny firenena maro manerantany, avy any Amerika Avaratra sy atsimo, firenena EU, firenena Eu Atsinanana, Est Asia ary Moyen Orient. Hanohy hampiasa ny haitao matotra izahay hamokarana vokatra tsara kokoa mifanaraka amin'ny filan'ny tsena.
BOSENDA Electric Hammer Chisel / Chisel, miaraka amina fitaovana 40Cr sy vy vy, maharitra maharitra kokoa ny 40CR, izay mety amin'ny rindrina biriky, rindrin'ny simenitra, konketra ary vato. Ny tahony dia MAX shank, SDS shank, Hex shank, pneumatic chisel ary sora-tanana 65A sy ny sisa, izay samy manana chisels maranitra, fisaka ary manitatra. Matetika ao anaty fantsona plastika ny fonosana, ny fepetra takiana manokana dia azo ampanjifaina mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa.
Manao OEM sy ODM izahay, ny fonosana dia azo namboarina.
BOSENDA Chisels dia mitazona fanoherana mahery vaika, maharitra amin'ny fahombiazan'ny fiainana, fitaovana vita amin'ny kalitao nahatonga ny hamafin'ny paiso ho eo alohan'ny ankamaroan'ny satan'ny tsena.
Azo ampiasaina amin'ny lavaka amin'ny rindrina vita amin'ny beton sy biriky ny rindrina, ny fanapahana sy ny fantsona. Manome andian-karazany isan-karazany izahay, toy ny pao maranitra, paosy fisaka kely, paosy fisaka lehibe, sakam-by somary boribory, sakamalaho maranitra, sns.
Ny halavan'ny chisel dia azo faritana arakaraka ny filan'ny mpanjifa.
Raha mila fanazavana misimisy kokoa, aza misalasala mifandray aminay.
Previous: Fambolena hazo boribory telo maranitra, fandavahana hazo, fanokafana lavaka hazo, karazana fandavahana rehetra
Manaraka: Fantsom-bozaka fanapahana diamondra, lelam-pandrefesana diamondra, felam-boninkazo vita amin'ny keramika, fantsom-bozaka marbra, ravina fanapahana grenady, tsofa tsofa
Fitrandrahana lavaka famaritana hazo, fandavahana hazo, W ...
Fitrandrahana fantsom-pananganana, firaka maro-miasa ...
Kianja efatra sy broch vita amin'ny ala efatra ...
Kitapo router, hazo mavesatra, hazo ...
Fitrandrahana fametahana herin'aratra, fitrandrahana beton, ...
Kitapom-bokatra, paompy Groove Chip, milina sodina mahitsy ...